Ubuciko nokuzijabulisa, Amabhayisikobho
I-World cinema igcwele amafilimu azinikezele ebuhlotsheni obunzima bezingane nabantu abadala. Kodwa abenzi befilimu baqhubeka befilimu ngokulandelana njengephrojekthi yeNanny. Abadlali abafake inkanyezi ku-comedy, u-Ashot Keschyan banabantu abaziwa kakhulu. Ihlala nje kuphela ukuthola ukuthi iyini isakhiwo se-tape?
"Nanny": abadlali, indaba emfushane
I-comedy "i-Nanny" izinikele ekufikeni kwezihlobo ezimbili zesifuba - uDima noMisha - eTurkey enelanga. Kwenzekani nabalingiswa abakhulu bezithombe "Inhlanhla"?
Abalingisi A. Keshchyan noN. Naumov badlala abasebenzi bekampani yezokuvakasha, eqhutshwa u-Valentine othile (Olesya Zheleznyak). Ibhizinisi alikhulumi kabi kulo, kodwa lapha ekugcineni kunethuba lokuphetha isivumelwano esivumelana nabalingani baseTurkey.
IBusiness Valentine Valentine iyaqonda ukuthi abalingani baseMpumalanga bakhetha ukubhekana namadoda, hhayi abesifazane. Ngakho-ke, ukuze akhulise amathuba akhe, uthatha uDima noMisha naye ohambweni lwebhizinisi. Futhi lapha okuthakazelisayo kakhulu kuqala: abangane ababili baphoqeleka ukuba banqume izinkinga kuphela ezihlobene nebhizinisi, kodwa emahlombe abo nazo zinakekelwa izingane ezintathu ezingenqandeki zomphathi wekhanda. Ingabe abomabhizinisi abasha bayobhekana nemithwalo yabo yemithwalo yemfanelo? Ngeke kube lula ukukwenza, ngoba uDima noMisha abazi ukuthi bangakhuphula kanjani izingane!
N. Naumov endimeni kaDima
Ku-movie "abadlali be-Nanny" abadlali beNaumov nabakwaKeshchyan badlala nabangane futhi ngesikhathi esifanayo nabo osebenza nabo ejensi lokuhamba. U-Dima noMisha baba abangane ngenxa yokungaqondakali kwabo okuphelele: benza umsebenzi wabo ngaphandle kokushisekela okukhethekile, ukushada futhi ungacabangi, ungahle uhlele ukuhlela izingane. Khona-ke inqwaba yemisebenzi iwa phezu kwabo, engakaze igcwaliseke: izingxoxo nabalingani bebhizinisi kudingeka ziqhutshwe, futhi zihlele impilo yansuku zonke ehhotela laseTurkey, futhi zinakekele izingane zomphathi wekhanda. Ungenzenjani ngaphandle kwemidlalo kanye nezingozi ezihle?
U-Nikolai Naumov, owadlala indima kaDima, waqala umsebenzi wakhe kumaqembu e-KVN "Friends" naseParma. Khona-ke i-humorist ihambele kahle emisebenzini yethelevishini "i-Mongoose" ne "Lopuhi". Ngo-2009, u-Naumov wanikezwa indima ebalulekile ku-sitcom yesiteshi se-TNT "Abafana bangempela". Kule phrojekthi i-Naumov isebenza kuze kube yilolu suku.
Ngo-2014, le nsizwa yanikezwa indima eyinhloko ekomidini ethi "Corporate", lapho, kanye noNicokolai, Miroslava Karpovich ("Obaba Bododakazi"), u-Aristarkh Venez ("Kadetstvo") noMarina Fedunkiv ("Kamedi Vumen") bavele esihlalweni.
A. Keshchyan njengoMisha
U-Ararat Keshchyan waziwa ngabathengi abaningi kwi-sitok ethi "Univer", evezwe esiteshini se-TV "TNT" kusukela ngo-2013 kuya ku-2015. E-movie "Umlingisi we-Nanny" waba nomsebenzi kaMichael - isisebenzi se-ejenti yokuhamba u-Valentina.
U-Ararat Keshchyan wazalelwa e-Abkhazian SSR ngo-1978. Kamuva umndeni wakhe wathuthela e-Adler ukuba ihlale unomphela. UKeschyan wayesenesithakazelo ku-KVN esikoleni. NjengoNaumov, emnyango webhizinisi lokubonisa, umculi oqale ukuhlaziya, hhayi ngaphandle kosizo lweClub of Merry ne-Smart.
Okokuqala, u-Ararat wadlala eqenjini leSochi "PFUR". Wabe esemenywa ukuba ahlanganyele e-Higher League eqenjini likazwelonke "PFUR".
Ngo-2008, iKeshchyan inqobe indima ebalulekile ku-sitcom "Univer". Wathola umlingiswa uMichael - omanizer ongakabonakali. Khona-ke umculi wabonakala kwi-movie ethi "Wedding for Exchange," i-movie-almanac ethi "Mama" nomdlalo womndeni "One Still Carlson."
Ngo-2016, ngokubamba iqhaza komdlali kumaskrini, isithombe "Abalingani Bangafunda" sizokhishwa. Ngaphandle kweKeshchyan, uSvetlana Khodchenkova (Uthando eDolobheni Elikhulu), u-Ekaterina Vilkova (Stilyagi), u-Olga Kuzmina (Cuisine) no-Ilya Lyubimov ("Musa ukuzalwa enhle") bazohlanganyela kulo msebenzi.
U-O. Zheleznyak njengomnikazi we-ejenti
U-Olesya Zheleznyak esithombeni sika-Ashot Keshchyan wadlaliswa ngumama-bhizinisi nomnikazi we-ejensi yokuhamba ngegama okuthiwa u-Valentina. Ngokungaqondakali okungaqondakali, i-ejenti lika-Valentina isebenzisa amadoda amabili kuphela - bonke abanye abasebenzi ngabesifazane. Ngakho-ke, lapho i-heroine Zheleznyak idinga usizo ekuphethweni kwesivumelwano nabalingani bangaphandle, kumele athembele kuDima noMisha, ngoba akanakho okunye okukhethwa kukho.
U-Olesya Zheleznyak ungumdlali we-comedic. Uqale umsebenzi wakhe ngendima kaZoya Misochkina efilimu kaTigran Keosyan "Lily of the silver silver". Kwabe sekukhona indima yabaduni kulolu chungechunge oluthi "i-Maroseika, 12" neziningi zeziqephu ezihlukahlukene zamafilimu.
Ngo-2004, umlingisi wayehlonishwa emigwaqeni, futhi ngenxa yonke indima yaseGalile, eyayithola e-sitcom ethi "Fair My Nanny." Kusukela ngaleso sikhathi, izinto zenze kangcono kakhulu kuZheleznyak: wadlala indima enkulu ezinkathini eziningana zochungechunge elithi "Abalingisi", kanye nomlingiswa ophakathi komculo we-multi-series melodrama "Miracle". Futhi, umlingisi angabonakala kumafilimu "izinsuku ezingu-8 zokuqala", "Wonderland" nethi "Uthando edolobheni elikhulu".
UL. Artemieva njengoGogo
U-Lyudmila Artemieva waqala ukusebenza ngamafilimu kusukela ngo-1986 - ngemva kokuphothula iziqu esikoleni iShchukin. Kuze kube ngama-2000, lo mdlali wezemidlalo wadlala indima ye-episodic kuphela: ingabonakala kumafilimu athi "Isiqhingi Sokukhishwa Kwesiphephelo", "Umyeni Wami Omunye", "Alphonse", "Umthandazo Wemithandazo", "Ungadabuki". Mhlawumbe indima ephawulekayo ka-Artemyeva phakathi nalesi sikhathi isithombe somuntu ohamba phambili uJackson ekuqhathaniseni ifilimu yomsebenzi we-A. Pushkin "Owesifazane-Owesifazane ohluphekayo".
Ngesikhathi sokuqala uLyudmila waphawula ngo-2003, lapho ethola indima ebalulekile kulolu chungechunge oludumile lwe-TV "Umshayeli wetekisi". Ngokuhamba kwesikhathi, izinkathi eziningana zale filimu zifakiwe.
Khona-ke kwakukhona izindima eziyinhloko emaceleni "Abathengisi", "Ngubani osendlini", "i-Snow Maiden yeNdodana Edala" nakweminye imiklamo eminingi.
Ku-movie "Umlingisi we-Nanny" udlala umama ka-Valentina nonogogo bamantombazane amathathu angenakubekezelela. Ngokwesigcawu sesithombe, ufika eTurkey ukuzosiza nezingane. Kodwa empeleni zonke izinto ziyahlukahluka kakhulu.
Ifilimu "Nanny" yangena ifilimu yomculi wokuqala u- Aglaya Shilovskaya. I-Aglaya ingabonakala kumafilimu anjenge-Courage, Alien Among Your Owns and My Mad Family.
Le filimu "Nanny" kwakungenye umsebenzi u- Angelina Dobrodnova. Naphezu kokuthi le ntombazane yayineminyaka eyishumi nesishiyagalolunye kuphela ngesikhathi sokuqopha, amafilimu akhe asevele afaka amafilimu athi "Ukuqhafaza", "Izihlobo Ezimbi" ne "Zaitsev + 1". Imisebenzi yamabhizinisi aseValentin nawo adlalwe nguGleb Serdyukov ("Isidleke Swallow", "Ngiya Kuzokuthola-2") no-Ilya Kostyukov (Isikole Esivaliwe, AmaMoms).
Ukudubula isithombe se-"Nanny" kwachitha ama-ruble ayizigidi ezingu-50. Ukuqoqa ehhovisi lebhokisi kwakungaba amadola ayizigidi eziyisithupha.
Intsha yaseMelika ihlabelela ngothando nangokolishi: uhlu
"I-Decameron yamaSulumane": abadlali befilimu mayelana nempi
"Ukubuya kweHero." Abadlali be-callback yokuncintisana
U-Chuck Norris: i-biography yendoda yangempela
Amahlaya "U-Entourage". Abadlali, abaziwa ngochungechunge lwe-TV "Amadoda Ahlakaniphile"
Ulmas Alikhodjaev - biography kanye nobuciko
Le filimu "Umthetho Ezithobela Citizen": abalingisi, izindima, sakhiwo
Indlela ukupheka nokunye okufana nokolweni emasakeni: ikakhulukazi ukupheka kanye nezincomo
Isifo Gierke sika: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Thina sikhule ivy. Izimbali endlini: ivy. Photo, ukunakekelwa kanye ukutshalwa ekhaya
Pipe Sandwich - a kushimula design zanamuhla
Isilinganiselwa Ababazi bakha ukuphotha. Indlela ukukhetha ukuphotha eluka?
Umbundu - okungukuthi Overture
Ukuzijwayeza ingane enkulisa: amagama ambalwa ngokubaluleka
Siphuzo esithandwayo carbonated, nokuqukethwe ikhalori. "Coca-Cola": Ukwakheka kanye nokulimala
Yini okufanele ibe okuhle izinwele wemvelo?
Uma jelly akuyona simisiwe - yini okumele ngiyenze?